Fikarohana momba ny firaisana Tantara taloha momba an'i Francesco Foscari | Wayne Peterson: Fanahy fanahy, fitarihan'ny fanahy & fitarihan'ny fanahy amin'ny tranga réincarnation - fikarohana Reincarnation
Ahoana no nahatonga izany? Fahatsiarovana ny fiainana teo aloha tamin'ny fahazazany, Ny Fanahy sy ny fitarihana intensive
Mpikaroka: Wayne Peterson
Tsy hamaly ny anarany i Wayne kely ary hanambara ny tena anarany dia Francesco Foscari
Wayne dia nihalehibe tamin'ny taona 1940, tany ambanivohitra Wisconsin, ivelan'ny Green Bay. Tamin'izy mbola kely dia nanomboka nanana fahatsiarovana an-tsokosoko momba ny fiainana taloha izy, tena saro-pantarina, ka tsy tsapany fa ny vatana vaovao indray no fototry ny fahatsiarovana ireo. Ohatra, tamin'ny mbola zazalahy kely, rehefa nanontany azy ny anarany ny olona, ​​dia tsy nety nilaza tamin'izy ireo i Wayne, satria nino tanteraka izy fa manana anarana tsara kokoa izay nanondro ny “tena izy” amiko. Mikasika ny toe-javatra dia manazava i Wayne:
“Ady faniriana teo amin'ny ray aman-dreniko sy izaho nandritra ny taona maro io. Rehefa hiteny izy ireo hoe: 'Wayne no anarany,' hoy aho avy hatrany fa tsy izany. Matetika ny reniko dia nihaika ahy hanome anarana hafa, saingy tsy tadidiko mihitsy hoe iza no anarako, na dia fantatro aza fa manana anarana hafa aho.
Tsy tamin'ny 12 taona monja aho no nanapa-kevitra fa i Francesco Foscari no tena anarako. Tsy anarana nomena avy amin'ny rivotra madio izany. Nandritra ny taona maromaro, ny anarana Foscari dia nitifitra manodidina ny lohako ho teny. Nosoratako niaraka tamin'i Francesco aho tamin'ny farany, satria tena marina izany. Nanana fifandraisana feno hatsaram-panahy lalina tamin'io anarana io aho. Fony mbola zatovo aho dia tapa-kevitra fa rehefa lasa olon-dehibe aho, dia hanova anarana ny anarako amin'i Francesco Foscari.
Ny zatovo rehetra amin'ny fotoana sasany dia mety mieritreritra ny hanova ny anarany hanahaka ny kintan'ny sarimihetsika na amin'ny anarana malaza kokoa. Amiko anefa dia anarana tsy mbola reko na hitako voasoratra na aiza na aiza. Raha ny marina dia tsy nisy anarana italiana teo amin'ny fiarahamonina misy anay any Wisconsin; hafahafa ny fahitako anarana italianina tena andriamby. ”
Mariho ny nitovizan'ny zavatra niainan'i Wayne tanora tamin'io Barbro Karlen, izay fony mbola zazavavy dia nilaza tamin'ny ray aman-dreniny fa tsy Barbro no anarany, fa Anne Frank. Ny tsy fitovizany dia tsy tsapan'i Wayne fa ny fanintona ny anarana Francesco Foscari dia mifandraika amin'ny fahatongavan'ny nofo taloha, satria Wayne dia tsy nahatadidy sary an-tsaina izany fiainana izany. Mifanohitra amin'izany, Barbro Karlen dia nanana fahatsiarovana mazava ny maha Anne Frank azy. Diniho ihany koa fa rehefa nilaza i Wayne fa Francesco Foscari ny anarany dia tsy nanana fomba mora hahafantarana hoe iza izy Foscari, satria am-polony taona maro talohan'ny nisian'ny motera fikarohana ao amin'ny Internet.
Tahaka ny nolazain'i Wayne fa ilay anarana Foscari dia nitsingevana tao an-tsainy nandritra ny taona maro, Peter Teekamp dia naheno ihany koa ny teny hoe "Mandeha" lasa teo an-tsainy nandritra ny fahazazany. Nitaky taona maro i Peter mba hahatsapa fa ireo teny ireo dia nanondro ny anarany, Gauguin, nandritra ny fiainany taloha.
Hitan'i Wayne fa afaka mandoko toy ny Master izy ary mamorona ny fiainana taloha any Venise
Mitantara i Wayne fa nandeha nandritra ny taona maro sy taorian'ny nanombohany nanatevin-daharana ny diplaomatika amerikana izy dia nandeha tany Venice, izay nahatsapa ny fihetseham-po miavaka tamin'ny déjà vu, fahatsapana efa teo alohany.
Na dia tsy nandray naoty kilasy ara-javakanto mihitsy aza izy, nandritra ny fahalavorariana, dia hitany fa azony natao ny afaka nandoko fahaiza-manao. Hitany fa tena tsara tokoa izy tamin'ny fampisehoana ny rafitr'ireo trano fanorenana, na dia noho ny antony maromaro aza, dia nisafidy ny haka sary ny sehatr'i Venise ihany izy. Rehefa nanontanian'ny namana ny antony nahatonga ny zavakanto rehetra tao amin'ny zavakantany dia nisarika ny sehatra Venetiana, tsy afaka nanome fanazavana i Wayne.
Ny sary asongadina etsy ambony sy ankavanana dia fanehoana an'i Venise nataon'i Wayne tamin'ny taona 1980, izay vita talohan'ny nahalalany hoe iza i Francesco Foscari ary talohan'ny nahatsapany fa efa taloha. Foscari. Ny sary dia manasongadina ny Lapan'i Doge, izay niainan'i Foscari nandritra ny fotoana maromaro. Amin'ny teny hafa dia nosoratan'i Wayne ny zava-niseho tamin'ny fiainany taloha toa an'i Foscari, na dia tsy fantany aza ny fifandraisany tamin'ny fiainana teo aloha rehefa namorona ity sary hosodoko ity izy. Tsarovy fa amin'ny tranga Paul Gauguin | Peter Teekamp, Dia namerina namoaka sketches izay nataon'i Gauguin i Peter.
Ny Fanahy Masina na Fanahy Masina Maitreya dia maneho Wayne ny tranony amin'ny fiainany taloha tany Venise
Nisy fandrosoana iray tamin'ny 1990, rehefa Wayne, 40 taona mahery taorian'ny nisehoan'ny fanintona voalohany an'ilay anarana italiana Foscari, dia nahazo fifandraisana an-tariby avy amin'ny fanahy antsoina hoe Maitreya. Wayne dia nanana traikefa tamin'io fanahy io hatramin'ny 1980, araka ny voalaza ao amin'ny bokiny, Fotoana tsy mahazatra, mahagaga olombelona. Nanontany an'i Wayne i Maitreya raha te hijery ny fiainany taloha tany Venise izy. Nilaza i Wayne fa hanao izany izy.
Avy eo i Wayne dia nahita fahitana tao an-tsainy nanomboka tamin'ny fahazazana ho lasa toy ny hoe nijery sarimihetsika. Nilaza i Wayne fa afaka mitazona ny tenany izy amin'ny alàlan'ny trano efa tranainy, saingy tsy nanana fahafahana hampiasa ny sitrapony hitantana ny lalany ao an-trano izy. Toy ny hoe nandeha an-tongotra izy, nijery sary avy tamin'io fanekena vao teraka io.
Mitantara i Wayne fa hitany tsara ny atin'ny trano iray nipetrahany. Fantany fa izy no tompon'ny trano ary nanomboka niaina ny fihetseham-po tsapan'ny lehilahy izy. Nahatsiaro alahelo be izy ary fantany fa ho faty izy amin'ny alina. Nahita ny tenany nanao akanjo lava mainty lava mena izy, izay nianarany tatỳ aoriana dia ny akanjo ofisialin'ny senatera Venetianina.
Avy eo dia nijery ny varavarankelin'ilay trano i Wayne ary nahita fa teo amin'ny rihana faharoa nisy trano goavam-be izy nihazakazaka teo amin'ny lakandrano kely iray, izay nalaina tao anaty lakandranomasina lehibe, angamba ny lakandranon'i Venise. Nivezivezy tany amin'ny lalantsara àry i Wayne ary nijery ny varavarankely iray izay nijery ny lamin'ny trano. Hitany fa nisy rindrina nanasaraka ny tranony tamin'ny lalana madinika iray, izay mifandray amin'ny tetezana fotsy manify iray izay namakivaky lakandrano iray hafa.
Nandre vehivavy niresaka taminy avy tany amin'ny farany ambany tao amin'ny trano koa i Wayne. Tsapany fa miteny italiana izy ary azony tsara, na dia tamin'ny andro niainany aza dia tsy mahay miteny italianina i Wayne.
Wayne dia mahita ny fiainany taloha sy ny fiainana an-davan'andro
Rehefa avy niaina nandritra ny androm-piainany tany Venezoela izy, tao amin'ny trano iray tao amin'ny lakandranon'ny Grand Canal, dia nividy boky tany Venezoela i Wayne, nifantoka indrindra tamin'ny trano teo amin'ny lakandranon'i Grand.
Taorian'ny fikarohana lalina dia nahita ny trano hitany nandritra ny fitsidihany i Mr. Peterson, izay teo akaikin'ny lakandrano iray, izay nisokatra tao amin'ny lakandranon'ny Grand Canal, ary nahitana tetezana fotsy fotsy tamin'ny farany. Ny trano dia tahaka an'i Wayne nahita azy io tao amin'ny fahatsiarovany ny fiainany taloha. Gaga i Wayne rehefa nahita fa nanorina ny trano Francesco Foscari, mpanao politika ary Doge an'ny Repoblika Venetiana, izay niaina tamin'ny 1373-1457. Ny fanambarana nataon'i Wayne tamin'ny ray aman-dreniny, tamin'ny fahazazany, dia tsy Wayne no anarany, fa i Francesco Foscari, dia nisy dikany ihany tamin'ny farany.
Ny sary aseho etsy ambony sy eo ankavanana dia mampiseho ny trano namboarin'i Foscari. Raha manitatra ny sary ianao amin'ny fametrahanao ny cursor eo amboniny, dia ho hitanao ny tetezana fotsy fotsy izay hitan'i Wayne tao amin'ny fahitany. Ampiasao ireo bokotra arrow izay hivezivezy eo amin'ny sary.
Wayne dia mahita ny fiainany taloha
Nitsidika an'i Venice i Wayne, ka niezaka nitady toerana fandevenana an'i Francesco Foscari. Hatramin'i Foscari dia Doge, mpitarika ny fanjakana, i Wayne dia nihevitra fa ny Foscari dia hiditra ao amin'ny Katedralin'i St. Mark, izay nandevenana ny Doges hafa. Tsy tao anefa i Foscari.
Avy eo i Wayne dia nentina tamim-pahazotoana Basilica Franciscan di Santa Maria Gloriosa dei Frari, izay matetika no antsoina hoe Frari, izay aseho amin'ny ankavanana. Wayne dia niakatra teo amin'ny lohasaha, izay nahatonga ny tady mena sy ny marika tsy hanohy ny mpitsidika intsony. Na dia teo aza ny sakana, i Wayne dia nieritreritra fa hahita ny fasan'i Francesco Foscari ao ambadiky ny alter. I Wayne dia namakivaky ny sisin-dalana ary nanaraka ny fiovana, izay nahita ny fasan'i Foscari.
Famintinana sy fanadihadiana momba ny tranga ao amin'ny vatana vaovao
Ireo singa manan-danja amin'io tranga io dia ahitana ny fahatsiarovan'ny fahazazana amin'ny anaran'ny fiainany taloha, Francisco Foscari. Nahita i Wayne fa afaka nandoko sary hosodoko lehibe izy, na dia tsy naka lesona tamin'ny zavakanto nandritra ny androm-piainany aza izy. Wayne dia nanamarika fa ny sary sokitra voalohany dia niompana tamin'i Venise.
Tato anatin'ny folo taona taty aoriana, dia nahitana sarimihetsika mivantana tamin'ny tenany tao amin'ny trano lehibe iray tao Venezoela i Wayne, izay nanamora ny fahitan'ny fanahy an'i Maitreya. Avy eo i Wayne dia nahita ilay trano tao amin'ny boky iray momba ny trano teo amin'ny lakandranon'i Venise. Ity trano nalain'i Wayne ity dia naorin'i Francesco Foscari. Avy eo i Wayne dia nentina nankao amin'ny fasan'i Foscari any Venise. Ny endriky ny endriky ny Wayne sy Foscari dia tsy miova.
Ny mampiavaka an'io tranga io dia ny nahatonga an'i Wayne namorona replicas ny zavakanto izay mety hanantena hahita any an-tranon'ny Doge of Venice. Ankoatra izany, tamin'ny alalan'ny zavakantony, dia nanova ny tranony tao Las Vegas ho any amin'ny lapa Venetiana i Wayne. Nanao izany izy talohan'ny nahazoany ilay fahitana, natolotr'i Maitreya, izay nitarika azy hitady ny tranobe namboarin'i Francesco Foscari.
Raha izany, Wayne dia tsy nahary namorona trano anatiny taratry ny fiainany taloha ho Doge of Venice. Ny sanganasa rehetra teo amin'ny rindrin'i Wayne sy ny valindrihana, sary an-kavanana, dia nataon'i Wayne tenany. Ity sary ity dia mety hitombo amin'ny fipihana eo aminy.
Na dia tsy naka lesona zavakanto nandritra ny androm-piainany nandritra ny fiainany tamin'ny fotoana niainany aza i Wayne, dia nitarika ny talenta azony tamin'ny fampidirana iray hafa, ny an'i Claude Ledoux, izay nasongadina tamin'ny ateraka indray.
Fitoviana ara-batana: Ny endrik'i Wayne dia mifanaraka amin'ny an'i Francesco Foscari.
Innate Past Life Talent: Na dia tsy nandray lesona momba ny kanto tamin'ny fiainany aza i Wayne dia hitany fa afaka namorona sary hosodoko mahafinaritra izy. Ny sangan'asany dia nifantoka tamin'ny sehatry ny Venice, taratry ny fiainany taloha tamin'ny naha Francesco Foscari azy. Wayne aza nandoko ny rindrina sy ny valindrihana tao an-tranony mba hamoronana ny lapan'ny Venetianany. Araka ny nomarihina, ny talenta Wayne dia toa nivelatra tamin'ny fahazazany Claude Ledoux.
Fanahy Masina, fitarihana fanahy & fitarihana fanahy: Ny raharahan'i Reincarnation an'i Wayne dia voavaha tamin'ny alàlan'ny fidiran'ny fanahy iray, izay notondroin'i Wayne ho Maitreya, izay nanome an-tsary ny seho tamin'ny fiainany taloha tany Wayne tany Venise. Taorian'ny nahitany ny fiainany taloha tany Venice tamin'ny alàlan'ity fidirana an-tsehatra nataon'i Maitreya ity, Wayne dia afaka nahita ity trano ity tao anaty boky iray momba ny trano ao amin'ny Grand Canal of Venice. An'i Francesco Foscari ilay trano, izay anarana Wayne, tamin'ny fahazazany, dia nilaza tamin'ny ray aman-dreniny hoe iza no tena anarany.
Ankoatra izany, dia nentina nankany amin'ny fasan'i Foscari any Frise any Venezo i Wayne.
Mandeha: Trangam-panjakan'olo-tokana an'i Louise Vanderbilt | Wayne Peterson